✍️: टिभी अन्नपूर्ण	 🕒 प्रकाशित: २०७८ जेष्ठ ७, शुक्रबार २१:२३
उनले सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा नाकमा प्रयोग गरेर कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिने खोप नेपालमै बनाउन सकिने जानकारी दिए । उनले भने – “संसारका खोप उत्पादक विभिन्न कम्पनीहरुले नाकमा प्रयोग गर्न सकिने खोपको बारेमा गरेको शोध तथा अनुसन्धानलाई निक्कै अगाडि पुर्‍याइसकेका छन् । केही कम्पनीको खोप त परीक्षणको क्रम मै छ । सरकारले अनुमति दिए आगामी ६ महिनाभित्र नेपालमा पनि यस्तो खोप बनाउन सकिन्छ ।”
यस्तै, हङकङ विश्वविद्यालय तथा बेइजिङस्थित वोन्ताई बायो फार्मेसीले पनि ‘नेजल स्प्रे’को क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । ती विश्वविद्यालयले दोस्रो चरणको परीक्षण गरिरहेका छन् ।
यस्तै, फिनल्याण्डको युनिभर्सिटी अफ हेलसिन्की र युनिभर्सिटी अफ फिनल्याण्डले प्रि–क्लिनिकल परीक्षण गरिरहेका छन् । युनिभर्सिटी अफ भर्जिनियाले पनि प्रि–क्लिनिकल परीक्षण थालेको छ ।
नेपालका नियामक निकायले आपत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उक्त खोपका लागि अनुमति दिने विश्वास व्यक्त गर्दै डा. सिंह भन्छन् – “अनुमति पाएको केही समयभित्रै हामी काम शुरु गर्न सक्छौ्रं । यसका लागि कुनै पनि जटिलता र समस्या पर्ने छैन ।” भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार भारत बायोटेकले निर्माण गरिरहेको त्यस्तो खोप पहिलो चरणको परीक्षणमा छ ।
विवरणअनुसार १८ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका मानिसमा उक्त खोपको परीक्षण भइरहेको छ । भारतका विभिन्न अस्पतालमा अर्को चरणको परीक्षणको तयारी भइरहेको छ । त्यसमा एम्स पटना, एपोलो अस्पताल चेन्नई र सेन्ट थेरेसा अस्पताल हैदरावाद रहेका छन् । सन् २०२१ को नोभेम्बर ३० सम्ममा सबै परीक्षणको नतिजा आउने विश्वास लिइएको छ । परीक्षणमा सकारात्मक परिणाम हात परे भारत बायोटेकले ठूलो परिमाणमा नेजल भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने जनाइएको छ ।
विज्ञहरुका अनुसार नेजल कोभिड खोपमा कुनै पनि प्रकारको सिरिञ्जको समेत जरुरत पर्दैन । अल्प विकसित तथा विकासोन्मुख देशका लागि कम मूल्यमै बन्ने यस्तो खोप विश्वव्यापी रुपमै ओसारपसारका लागि समेत सहज हुनेछ । कम तथा न्यून आय भएका देशका लागि यस प्रकारको खोप एउटा वरदान नै सावित हुने शोधमा संलग्न लानकास्टर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता डा मुनिरको भनाइ छ । डा. समर्थ सिंह यसमा सहमति जनाउँदै भन्छन् – “महङ्गो मूल्य तिरेर खोप खरिद गर्न नसक्ने देशका लागि नेजल खोप नै उपयुक्त र सही छनोट हुन सक्छ ।”
शोधमा सहभागी भर्जिनिया विश्वविद्यालयका डा बिल पेट्रीका अनुसार यस प्रकारको खोपको खोजी गर्नु सजिलो र सरल छैन तर, परीक्षण सफलताउन्मुख छ । यो कम उमेरका बालबालिकामा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । नाट्रिक अक्साइड नेजल स्प्रे जस्तै हङकङ विश्वविद्यालयले समेत यसमा खोज गरिरहेको छ । झण्डै सात हजार बिरामीमा यो खोपको परीक्षण भइरहेकै पनि छ ।
नेपालमा समेत कोरोनाको खोप उपलब्ध गराएको भारतकोे सिरम इन्स्टिच्यूटले समेत सोही प्रणालीमा आधारित खोपको पहिलो चरणको परीक्षण गरिरहेको छ ।
हाल प्रचलनमा रहेका अधिकांश खोपमा कोरोना भाइरसकै मृत सेलको प्रयोग गरिएको छ । यो सबै उमेर समूहका मानिसमा प्रयोग गर्न नसकिने मात्र हैन एउटा निश्चित तापक्रममा राख्नुपर्ने वाध्यता पनि छ ।
तर, नाकमा प्रयोग गरिने खोपमा भने यी र यस्ता झण्झट हुँदैनन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत परीक्षणका लागि अनुमति दिइसकेको र संसारका विभिन्न आठ कम्पनी तथा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान भइरहेको यस खोपको छिट्टै नतिजा आउने विश्वास लिइएको छ ।
डा समर्थ सिंहका विचारमा नेपालका नियामक निकायले अनुमति दिए यूरोपमा परीक्षण भइरहेको यस्तो प्रविधिलाई नेपालमा ल्याएर तत्कालै काम गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।